Best Life Battery Life Iphone 6 Battery replacement China Manufacturer
Description:Iphone 6 Battery replacement,Iphone ny fiarovana mafy indrindra 6,Best Life Cell Phone Battery
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 6 Battery > Best Life Battery Life Iphone 6 Battery replacement
famokarana: 360000pcs per month
Toerana iraisana: Shenzhen China
taratasy fanamarinana: CE,FCC
Ity batterie iphone 610 mAh ity dia manana asa tsara Amin'ny fiainana an-tariby mandeha amin'ny telefaona, ny ora fiantsoana dia eo amin'ny ora 10 ora ary ny ora 4G amin'ny Internet dia eo amin'ny 11 ora. Izy io dia manamboatra ny cellule vaovao ary ny TI chip, kalitao mitovy amin'ny orinasa. Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso henjana, ny taham-panafaintsika dia 0,2%. Ampidino ny batterie maharatsy malaza ary mahazo ny kalitao vaovao ambony, ny batterie iphone manana 12 volana maimaim-poana. Miaraha miasa aminay ny orinasa sy ny volanareo.
Kapila: 1810 mAh
Volana voafetra: 4.35V
Fahaiza: Tahaka ny batterie iphone original
Fe-potoana: Maherin'ny 500
Fitaovana: Polymer lithium pure cobalt
Fanamarinana: CE, FCC ary RoHS
Fotoana miala aina: 5-8 andro
Fihetsiketsehana: Package fandefasana baoritra mainty na Customized
Vola: L / C, T / T, Western Union, Paypal sns.
Fandefasana: manodidina ny 3-7 andro aorian'ny fandoavana
MOQ: 100 tapitrisa
Ireo endri-javatra ho an'ny fiainana an-tanan'ny iPhone 6 finday
1. Tsy misy fiantraikan'ny fahatsiarovan-tena, vonona ny entina am-bavany sy entina
Tsy voatery hiteraka fahatsiarovan-tena izy io, tsy hahatonga ny fahaverezan'ny fahaiza-manao rehefa averina indray ilay batterie nefa tsy voavaha tanteraka.
2. Tsy misy ratsy, amin'ny fampiasana fitaovam-pandaminana madio amin'ny cobalt
Mampiasa fitaovana madio amin'ny cobalt ny fitaovana mampidi-doza toy ny lead, mercury, nickle dia tsy misy. Azonao atao ny mahatsiaro ho maivamaivana momba ny fampiasana.
3. Ny fahafaha-manao tanteraka, mitovy ny fanao am-paosy
Ny totaliny dia 1810 mAh, izay mitovy amin'ny original.100% mifanentana amin'ny findainao, azonao antoka fa tsara ny miasa.
Shenzhen Hequanqingnuo Electronic Technology Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina mpitaingina telefaonina efa ho 7 taona. Manana maherin'ny 1000 metatra toradroa-miasa amin'ny mpiasa 100 eo ho eo izy. Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2012, dia manao karazana fepetra henjana avy amin'ny fitaovam-piadiana ka hatramin'ny vokatra vokarin'ny vokatra. Toy ny mpamatsy sy tompon'andraikitra amin'ny orinasam-pirahalahiana, dia mahazo laza malaza isika amin'ny solaitrabe amin'ny telefaonina. Manana tamba-jotra maneran-tany isika mba hahazo laza tsara.
Hequanqingnuo dia manana rafitra fitantanana tanteraka sy siantifika ary mifantoka amin'ny fahamendrehana, miantoka amin'ny fifanarahana, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, ary manaiky ny tetik'asa ara-barotra momba ny karazam-pitantanana amin'ny varotra mufti sy tombom-barotra kely amin'ny fivarotana avo.Products dia nandalo ny RoHS / CE / FCC Certificate, teknôlôjia tsy misy fepetra, azo averina indray. Manantitrantitra ny fitsipiky ny 'Quality Voalohany, ny fitoviana ary ny tombontsoa iraisana, ny fampandrosoana iombonana ary ny fanompoana ny tsara'.
Product Categories : Batterie IPhone > IPhone 6 Battery
Best Life Battery Life Iphone 6 Battery replacement Contact Now
new battery rechargeable iphone 6 battery life Contact Now
ny fiantohana laptop smartphone maharitra maharitra indrindra Contact Now
iphone enina batary fiasana amin'ny varotra Contact Now
Fiarandalamby feno 6 iPhone 1810mAh Contact Now
2019 Fanoloana bateria iPhone vaovao tonga Contact Now
Iphone 6 Battery replacement Iphone ny fiarovana mafy indrindra 6 Best Life Cell Phone Battery Iphone 6S Battery replacement Iphone 8 Battery replacement iphone 6 battery replacement Iphone 6 Battery replacement Price Ipod 4 Battery replacement